Xildhibaan Aadan Madoobe oo u sharaxan guddoomiyenimada Golaha Shacabka – Kalfadhi
Xildhibaan Aadan Madoobe oo u sharaxan guddoomiyenimada Golaha Shacabka
April 17, 2018 April 17, 2018 Kalfadhi
Xildhibaan Aadan Maxamed Nuur “Madoobe” ayaa shaaciyay in uu u sharaxan yahay xilka guddoomiyenimada Golaha Shacabka ee uu iska casilay Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari toddobaadkii hore. Xildhibaanka ayaa musharaxnimadiisa kaga dhawaaqay shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho.
Aadan Madoobe ayaa horey usoo noqday guddoomiya Golaha Shacabka ee dowladdii KMG ahayd ee madaxweyne Cabdulaahi Yusuf Axmed kadib markii xilkaas laga qaaday Shariif Xasan Shiikh Aadan bishii Janaayo ee sanadkii 2007dii. Shariif Xasan iyo xubno ka tirsan Golaha Shacabka ayaa markaas heshiis la gaaray golaha midowga maxaakiintii islaamiga aheyd ee maamulay Muqdisho iyo deegaano kale oo ka tirsan koofurta Soomaaliya. Laakiin horraantii 2010kii ayay xildhibaanadu xilka ka qaadeen Aadan Madoobe iyaga oo dib u doortay Shariif Xasan.
Si kastaba, waxaa jira mudaneyaal dhowr ah oo la tuhmayo inay dedaal ugu jiraan xilka guddoomiyenimada Golaha Shacabka ee uu iska casilay mudane Jawaari. Xildhibaanada aan weli si rasmi ah u shaacin musharaxnimadooda laakiin olole hoos ku jira waxaa ka mid ah mudane Maxamed Mursal Shiikh oo sidoo kale ah wasiirka gaashaandhiga. Xildhibaan Maxamed Mursal waxa uu horey u ahaa safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya Turkeyga, waxaana jira warar sheegaya in xukuumadu ay taageereyso musharaxnimadiisa.
Xeer hoosaadka Golaha Shacabka ayaa faraya xildhibaanadu ay ku doorteen guddoomiye cusub muddo 15 maalmo shaqo ah gudahood, taas oo ka bilaabaynaysa maalintii uu iscasilay guddoomiye Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari oo ah 8da bishan Abriil. Laakiin guddoonka iyo guddiga joogtada ah weli faahfaahin kama bixin hanaanka iyo xilliga doorashada guddoomiyaha cusub.
Aadan Madoobe oo maanta shaaciyay musharaxnimadiida waxa uu horey uga tirsanaa jabhada ururka ciidamada iskacaabinta ee Raxanweyn (RRA) oo uu ka noqday guddoomiye ku-xigeenka koowaad. Waxa uu sidoo kale noqday wasiirka garsoorka ee dowladdii madaxweyne Cabdulaahi Yusuf Axmed, isaga oo markale noqday wasiirka warshadaha iyo ganacsiga ee xukuumaddii Raysal wasaare Cabdiweli Shiikh Axmed.
A test page – about us
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare: Waxaan u baahannahay in aan wada jir uga shaqeyno dhameystirka dastuurka